मुखबाट गन्ध आउने समस्याबाट पीडित हुनुहुन्छ ? यस्ता छन् मुखबाट गन्ध आउने कारण र समाधानका उपायहरु – Kavreonline Patra
मुख्य पृष्ठ /Health/मुखबाट गन्ध आउने समस्याबाट पीडित हुनुहुन्छ ? यस्ता छन् मुखबाट गन्ध आउने कारण र समाधानका उपायहरु
मुखबाट गन्ध आउने समस्याबाट पीडित हुनुहुन्छ ? यस्ता छन् मुखबाट गन्ध आउने कारण र समाधानका उपायहरु
मुखबाट गन्ध आउने समस्याले प्राय जसो व्यक्तिहरू चिन्तित हुन्छन् । कहिलेकाँही यो गन्ध यति बढी हुन्छ कि कसैसँग कुरा गर्न गाह्रो हुन्छ। यसको पछाडि धेरै कारणहरू हुन सक्छन् । ती मध्येका केही हाम्रो दैनिक बानीहरु पनि हुन सक्छन् । यस्ता कारणहरू र त्यसको उपचारको बारेमा तल चर्चा गरिएको छ ।
मदिरा सेवन – रक्सीको सेवनले मुखबाट धेरै गन्ध आउछ । तरल पदार्थ भएपनि रक्सी पिए पछि मुख सुक्छ जसको कारण ब्याक्टेरिया बन्न थाल्छ। चिकित्सा भाषामा भन्ने हो भने यी ब्याक्टेरियाहरूको कारण होलिटोसिस (मुखबाट गन्ध आउनु) हुन्छ । यस बाहेक कफि, मसलादार खाना र सिगरेटले पनि मुख सुक्खा बनाउछ । सुख्खा मुखको कारण सुतेको बेलामा लार पाउदैन जसको कारण सासमा गन्ध आउन थाल्छ।
तपाईंको जिब्रो – जिब्रोमा रहने जीवाणुहरूको कारण सासमा गन्ध आउँछ । यसका लागि ब्रश गरेपछि तपाईंको जिब्रो दैनिक सफा गर्नु महत्त्वपूर्ण छ । यसको लागि प्लास्टिकको सट्टा धातुको टंग क्लीनर प्रयोग गर्नुहोस् । यसले तपाईंको जिब्रो सफा राख्दछ र मुखबाट गन्ध आउदैन ।
चिसो – ब्रोन्काइटिस जस्ता श्वासप्रश्वासको संक्रमणले सासमा गन्ध आउदछ । यस्ता समस्याहरुबाट जब तपाइको नाक बन्द हुन्छ,तब तपाईं मुखबाट सास फेर्नुहुन्छ । जसको कारण मुख सुक्छ र सासबाट गन्ध आउँछ ।
सुख्खा फल – केहि सुख्खा फलहरू धेरै मीठो हुन्छन् जसमा ब्याक्टेरिया सजिलैसँग आउँदछन् । जस्तै १/४ कप किशमिशमा २१ ग्राम चिनी हुन्छ । यद्यपि तिनीहरूमा प्राकृतिक मिठास हुन्छन् जसले शरीरलाई फाइदा पुर्‍याउँछ । केहि सुख्खा फलहरू दाँतमा टाँसिन्छन् । यसको कारणले सासमा गन्ध आउँछ । ड्राई फलहरु खाए पछि अनिवार्य रुपमा ब्रश गर्नु राम्रो हुन्छ ।
लो कार्ब डाइट – लो कार्ब डाइट र उच्च प्रोटीन सेवनले प्रायः मुखमा गन्ध आउँछ । यस्तो डाइटमा फ्याट बर्नको प्रक्रियाले केटोन नामको यौगिक बनाउँदछ । केटोनको कारणले सासमा गन्ध आउछ । यसको लागि समय समयमा चुइङ्गम चपाउनु राम्रो हुन्छ ।
औषधिहरू – एन्टीडिप्रेसन्स र एलर्जीसहित करिब ४०० भन्दा बढी औषधिहरूले मुखमा लारको प्रवाहलाई रोक्दछ । लारले ब्याक्टेरियाहरूलाई मुखबाट टाढा राख्छ। यदि तपाईं त्यस्ता कुनै औषधि लिइरहनुभएको छ भने तरल पदार्थको मात्रा बढाउनुहोस्। धेरै पानी पिउनुहोस् । बिना सुगर वाला चुइङ्गम चपाउनुहोस । मुख सधैं सफा राख्नुहोस्।
टन्सिल स्टोन्स – टन्सिल स्टोन ब्याक्टेरिया, खानाका स-साना कणहरु, मृत कोशिका र बलगम मिलेर बनेको हुन्छ । यो तपाईंको टन्सिल वा जिब्रोको पछाडिको भागमा अड्किएका हुन्छन् । तिनीहरूले कुनै नोक्सान गर्दैनन् तर सासमा गन्ध उत्पन्न गराउदछ । यदि तपाईंलाई यो समस्या छ भने खाना खाएपछि नुन पानीले कुल्ला गर्नुहोस्।
पाचन शक्तिमा कठिनाई – कहिलेकाँही हामी यस्ता चिजहरु खान्छौ जो सजिलै पच्दैन । यसको कारणले पेट फुल्ने र एसिडिटीको समस्या हुन सक्छ । जसको कारणले गर्दा मुखबाट गन्ध आउने समस्या हुन सक्छ त्यसैले पचाउन गाह्रो हुने चिजहरु सेवन नगर्दा उत्तम हुन्छ ।
कसरी बढाउने रोग–प्रतिरोधी क्षमता ?
अण्डा खाएपछि भुलेरपनि नखानुहोस् यी २ चिज
क्या’न्सर, सु’गर र उ’च्च र’क्तचाप जस्ता रो’गको अ’चुक औ’षधी